कोरोनासँग लड्न ईम्युनिटी पावर बढाउँदै प्रचण्ड ! – Koshidaily
कोरोनासँग लड्न ईम्युनिटी पावर बढाउँदै प्रचण्ड !
access_alarms Koshi daily १० चैत्र २०७६, सोमबार ०३:४५	chat_bubble_outline 0	Comments
काठमाडौं, ९ चैत्र । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिवेला होम–क्वारेन्टाईनमा छन् । उनले सबै भेटघाट बन्द गरेका छन् । उनी यतिवेला आफ्नो निजी निवास खुमलटारमा आराम गरेर बसेका छन् । घरमा बस्दापनि उनले आफूलाई शारिरीक रुपमा फिट एण्ड फाइृन राख्न व्यायाम गर्ने गरेका छन् ।
अध्यक्ष दाहालका छोरी ज्वाँई जीवन आचार्यले फेशबुकमा दाहालले साईकल चलाएको फोटो राख्दै लेखेका छन्,‘सेल्फ क्वारेन्टाइनका बेला पनि शरीर चुस्त राख्न जरुरी छ। शारीरिक व्यायामले ईम्युनिटी पावर बढाइ कोरोनाविरुद्ध लड्न मद्दत पुर्‍याउँछ।’
अध्यक्ष दाहालले विश्व्यापी महामारीका रुपमा देखापरेको कोरोना भाइरस ९कोविड–१९० को संक्रमणबाट बच्न सावधानी र चेतना अभिवृद्धि गर्न सिंगो पार्टी पंक्ति र आम जनसमुदायमा अपील गरेका छन् । उनले पार्टी र सरकारले लिएका नीतिगत र व्यवहारिक निर्णयलाई दृढतापूर्वक पालना गर्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह पनि गरेका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्ने तयारीका लागि आवश्यक औषधि, उपकरण र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज तुल्याउन आफ्नो पहल बढाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै राष्ट्रिय एकता र उच्च मनोबलका साथ यसको सामना गर्न सबैमा अनुरोध गरेका हुन्।